Waayo Waayo: Sanjay Dutt muxuu ka agsameenayay SRK iyo Jackie Shroff – Filimside.net
Waayo Waayo: Sanjay Dutt muxuu ka agsameenayay SRK iyo Jackie Shroff
January 12, 2019 Jabriil Abdikadir
Taariikhda: January 12, 2019
Sawir walbo sheeko ayaa ka dambeeso ama dhacdo lagu xasuuso sidaa darteed sawirka maaanta idiin muuqdo waa mid waayo waayo ah sidoo kalena muujinaayo arin sharaxaad u baahan.
Waa bartamihii 90-maadkii waxaana halka sawir ka wada muuqdaan soo saare Boney Kapoor, Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan iyo Jackie Shroff.
Hadaba su’aasha taagan waxay tahay Sanjay Dutt muxuu goobta ka sameenayay ileen sedexdaan atoore hal filim kama soo wada muuqanin xiligaas?
Director Mukul Anand oo horey u sameeyay aflaanta waa weyn Agneepath, Hum iyo Khuda Gawah ayaa ku dhawaaqay filimkiisii xigay Trimurti horaantii 90-maadkii.
Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan iyo Anil Kapoor ayaa loo wada dhiibay filimka Trimurti, laakiin nasiib dar qaraxyadii Bombay ka dhacay sanadii 1993 ayuu Sanjay Dutt ku lug yeeshay waxaana la dhigay xabsiga.
Mashruucii Trimurti sidaas ayuu ku waayay waxaana xigtay in soo saare Subash Ghai uu la fariistay Sunny Deol kana dalbaday inuu filimkaan wax ka jilo laakiin Sunny si dhaqsi ah ayuu ku diiday markii uu warqada ku arkay in SRK wax ka jilaayo filimkaan madaama uu horey kaga xumaaday filimkii Darr wixii kala qabsaday labadooda!
Sanjay Dutt inta badan filimka Trimurti wuu wada duubay laakiin qaybaha dhamaadka iyo muuqaalo kale ayaa Dutt harsanaa waxaana lagu badalay Anil Kapoor ayadoo filimka qarashkiisa sare usii kacay madaama muuqaaladii Sanjay uu Anil dib u duubay.
Trimurti qorshaha wuxuu ahaa in la daawado December 1994 balse 12-bilood dib u dhacay waxaana la daawaday 22 December 1995.
Trimurti rikoor weyn ayuu sameeyay maalintiisa kowaad madaama uu noqday filimkii ugu horeeyay 1 Crore maalinta kowaad keeno sidoo kalena 3 Crore ayuu keenay sedexda maalmood ee ugu horeesay 1995 laakiin nasiib daro gadaal ayuu ka fashilmay wuxuuna noqday mashruuc guul dareestay oo Flop ah.
Waxaa Aqrisay 324